7 amin'ireo lesoka WhatsApp mahazatra indrindra sy ny vahaolana | Vaovao momba ny gadget
7 amin'ireo lesoka WhatsApp mahazatra indrindra sy ny vahaolana
WhatsApp Io no fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao, na dia misy aza ny sasany toa ny Telegram na ny Line mitana andraikitra lehibe, na dia tsy manatona ny isan'ny mpampiasa tantanan'ny serivisy an'ny Facebook aza. Mampalahelo fa ny WhatsApp dia mbola fampiharana iray izay manome olana sy aretin'andoha sasany amintsika, izay ezahantsika hovahana anio.
Ny ankamaroan'ny olana sendra antsika amin'ny WhatsApp dia mahazatra ary ny ankamaroany dia manana vahaolana somary tsotra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao 7 amin'ireo lesoka WhatsApp mahazatra indrindra sy ny vahaolana, ka raha manana fahoriana mijaly amin'ny iray na maromaro amin'izy ireo ianao dia afaka mamaha azy haingana ary tsy mila manasarotra loatra ny fiainanao.
1 Tsy afaka mametraka WhatsApp aho
2 Ny fifandraisana amiko dia tsy miseho ao amin'ny WhatsApp
3 Ny horonan-tsary dia alaina samirery aorian'ny data momba ny tahanay
4 Tsy henoko ny feon-tsoratra
5 Miandry aho ary miandry fa tsy mahazo ny kaody fampandehanana mihitsy
6 Tsy hitako ny fifandraisana farany amin'ny fifandraisana
7 Ny antso amin'ny feo dia manana kalitao faran'izay ratsy
Tsy afaka mametraka WhatsApp aho
Ny olona rehetra na saika manana finday avo lenta dia maniry ny hametraka WhatsApp raha vantany vao mihodina izy ireo mba hahafahany mifandray amin'ny fianakaviany na ny namany. Mampalahelo fa tsy ny olon-drehetra no afaka mametraka ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo, na dia misy antony maro aza aza.
Ny voalohany dia mety satria manana ianao olana amin'ny nomeraon-telefaoninao, fa tsy mandeha tsara na amin'ny fomba marina izy. Ny faharoa dia mety satria niaritra fandrarana ianao, izay mety noho ny antony samihafa, ary mety ho mora na sarotra ny miala amin'izany-
Raha tsy ao anatin'ny iray amin'ireo tranga roa nohazavaina izahay dia azo inoana fa tsy afaka mametraka WhatsApp ianao satria tsy mifanaraka amin'ny serivisy ilay kinovan'ny rindrambaiko finday. Ohatra Raha mampiasa finday avo lenta amin'ny Android 2.2 na rafitra fiasa ambany ianao dia aza manandrana fa tsy ho afaka hametraka azy ianao, amin'ny fomba mahazatra na manao ahoana na manao ahoana ny fiezahanao.
Ny fifandraisana amiko dia tsy miseho ao amin'ny WhatsApp
Mety ity ny lesoka mahazatra indrindra izay saika ny mpampiasa rehetra no nijaly tamin'ny fotoana sasany tao amin'ny WhatsApp. Ary tsy misy olona afaka fa rehefa mametraka ny rindranasa dia manandrana miditra amin'ireo mpifanerasera aminay izahay ary tsy misy, na impiry na impiry no manavao. Izany dia mety noho ny famoahana ireo fifandraisana avy amin'ny kaonty Google na satria tsy misy fifandraisana na iray aza voatahiry mivantana ao amin'ny karatra SIM anao na amin'ny finday avo lenta.
Raha voatahiry ao amin'ny kaontinao Google ny fifandraisanao dia mila mampifanaraka azy ireo tsara fotsiny ianao, mba hiseho ao amin'ny WhatsApp avy eo. Mandehana any amin'ny Settings, avy eo mankany amin'ny kaonty ary farany amin'ny Google hampiatoana ny fampifanarahana ary miaraka aminy ny fisehon'ny fifandraisana rehetra.
Raha toa ka tsy manana backup ny contact-nao ianao, na amin'ny Google na amin'ny fomba hafa, dia tsy maintsy averinao amin'ny tanana izy ireo, mba hiseho amin'ny WhatsApp avy eo.
Ny horonan-tsary dia alaina samirery aorian'ny data momba ny tahanay
Tsy misy olona miala ao an-trano raha tsy mitondra ny findain'izy ireo ao am-paosiny na poketra, ary nanjary ampahany lehibe amin'ny fiainantsika izy ireo, saika ny data azonay. Raha tsy misy angona dia tsy misy azo atao ny manatona ireo tambajotran-tseraseranay, na mifehy WhatsApp amin'ny hafainganana.
Iray amin'ireo lesoka, na iray amin'ireo olana mety ho hitantsika ao amin'ny WhatsApp, ny an'ny fampidinana video na sary mandeha ho azy, izay mitarika amin'ny fanjifana angona, indraindray tsy ilaina. Ary ilay tsy manana ilay namana mahazatra, na ao anatin'ny vondrona lehibe, izay andefasan-dry zareo horonantsary tsy tapaka ary sarin-javatra ny zava-drehetra mitranga aminy mandritra ny andro.
Mba hisorohana ny horonan'ireo horonan-tsary na sary ho azy ireo dia tsy maintsy ovainao ao amin'ny toe-javatra WhatsApp, ary ovao izy ity mba hisintona azy ireo fotsiny rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi izahay. Ataovy ao an-tsaina fa orinasa telefaona finday maro no miantoka vola mihoatra ny angon-drakitra, noho izany dia tokony hikarakara faran'izay betsaka ireo izay atolotr'izy ireo ho anay ny vidiny tany am-boalohany amin'ny tahanay.
Tsy henoko ny feon-tsoratra
Isika rehetra dia mandefa sy mandray naoty am-peo isan'andro ary tsy misy olona misalasala ny amin'ny fomba fanaovana azy. Ny tsy fantatry ny olona maro dia ny WhatsApp no ​​mampiasa ny sensor proximity an'ny findainao hampihenana ny habetsaky ny feo rehefa mahita vatana eo akaiky eo izy. Midika izany fa isaky ny mitondra ny terminal anao eo amin'ny sofinao ianao mba handrenesana tsara kokoa ny memo feo dia tsy misy na inona na inona henonao.
Mba hamahana ity olana ity, tokony hiezaka ny tsy hitondra ny smartphone-nao amin'ny sofinao na amin'ny faritra hafa amin'ny vatanao ianao, na hampiasa headphone izany dia hahafahanao mihaino ireo feon-tsoratra tsy misy olana ary ambonin'izany rehetra izany dia mitazona ny tsiambarateloo tsy ho olon-kafa.
Raha tsy misy fomba andrenesanao ny feon-tsoratra dia tadidio fa mety tsy mahomby ilay mpandahateny ny findainao ka tsy hanana safidy afa-tsy ny mitondra azy io any amin'ny serivisy teknika ary tsy misy ifandraisany amin'izany ny lesoka. Jereo miaraka amin'ny WhatsApp.
Miandry aho ary miandry fa tsy mahazo ny kaody fampandehanana mihitsy
Mba hanombohana mampiasa WhatsApp, tena ilaina ny mampihetsika ny kaontinao amin'ny alàlan'ny SMS. Ny serivisy fandefasan-kafatra mailaka avy hatrany dia mamantatra ny hafatra an-tsoratra voaray ary tsy mila manokatra ny rindranasa Messages akory izahay amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ho fanampin'izay, efa ela ihany koa izahay dia afaka nampandeha ny kaontinay tamin'ny alàlan'ny fandraisana antso, izay hanomezanay anay ny kaody.
Indraindray ny SMS miaraka amina kaody fampandehanana dia tsy tonga na oviana na oviana no hiandrasantsika, na dia hanana antso aza isika amin'ny alàlan'ny antso am-peo, izay tsy manome fahatokisana firy an'ireo mpampiasa na dia azo antoka tanteraka aza. Raha izany no izy dia zahao raha manana karatra SIM natsofoka ao amin'ny terminal anao ianao ahafahanao mandray ny SMS na hoe napetrakao tsara ny fikafaran'ny firenenao handefasana ny kaody fampidirana
Tsy hitako ny fifandraisana farany amin'ny fifandraisana
Ny iray amin'ireo lesoka mahazatra indrindra mety ho hitantsika ao amin'ny WhatsApp dia ny an'ny tsy mahita ny ora anaovana fifandraisana farany an'ny iray amin'ireo mpifanerasera aminay, zavatra tena ilaina ho an'ireo rehetra mifosa amin'ny natiora. Na izany aza, mety tsy sendra hadisoana izahay ary izany dia ny serivisy fandefasan-kafatra eo noho eo dia namela anay hanova ny fiainana manokana hatrizay ary hanafina ny fotoananay ny fifandraisana farany.
Avy amin'ny fikirana sy fidirana amin'ny kaonty dia afaka misafidy isika raha te hampiseho ny daty sy ny ora anaovana fifandraisana farany. Mazava ho azy, tadidio fa raha tsy avelantsika haseho ny fifandraisantsika farany dia tsy hahita ny an'ny mpampifandray antsika koa isika.
Raha tsy hitanao ny fotoana ifandraisan'ny mpifandray farany, dia aza manahy fa tsy hadisoana WhatsApp izany, saingy tsy nety ny naneho ny daty sy ny ora nifandraisanao farany. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana azy fotsiny dia ho afaka hahita sy hifosa amin'ny fotoana nifandraisana farany ianao, nefa tadidio hatrany fa ho hitan'izy ireo koa ny anao nefa tsy misy ferana.
WhatsApp dia manolotra ny mpampiasa rehetra ny fahafahany manao antso am-peo, izay atao amin'ny alàlan'ny tahan'ny angoninay na ny fifandraisana WiFi. Raha tsikaritranao fa tsy dia tsara kalitao ireo antso ataonao na voarainao dia noho ny fifandraisana Internet mahantra na ratsy no mahatonga izany.
Mba hamahana ity lesoka ity, fotsiny tokony hitady fifandraisana tsara kokoa amin'ny tamba-jotra tambajotra ianao. Raha tianao hanana kalitao tsara indrindra ny antso an-tariby dia tokony hiezaka ny hifandray amin'ny tamba-jotra WiFi amin'ny fotoana rehetra ianao satria raha tsy izany ny zavatra mahazatra indrindra dia manana kalitao tena ambany izy ireo. Raha tsy manana fidirana amin'ny tamba-jotra WiFi ianao dia tokony hiezaka farafaharatsiny hifandray amin'ny tamba-jotra 4G, na dia tadidio aza fa matetika dia avo be ny fanjifana angon-drakitra an'ity karazana antso ity.
Tamin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia nandinika ny sasany amin'ireo lesoka mahazatra indrindra an'ny WhatsApp izahay, manolotra ny vahaolana, ary mahazatra kokoa ihany koa. Raha mahita lesoka izay tsy ato amin'ity lisitra ity ianao dia afaka mankany amin'ny pejy fanampiana azon'ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny pejy ofisialiny.
Ary koa raha mbola tsy miatrika hadisoana mahatsiravina izahay na efa fantatrao fa tsy misy vahaolana izany dia azonao atao ny manatona anay ary hiezaka izahay hanampy anao amin'izany, arak'izay tratry ny herinay.
Nahavita namaha ny lesoka naverin'i WhatsApp anao ve ianao noho ity lahatsoratra ity?. Lazao anay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay, ary vonona hanome anao tanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » 7 amin'ireo lesoka WhatsApp mahazatra indrindra sy ny vahaolana
Sonia Cedenilla Pablos dia hoy izy:
Mba hamahana ireo olana whatsapp fahita indrindra dia ampiasaiko ity app ity izay asehoko anao; https://play.google.com/store/apps/details?id=faq.whatsapphelp&hl=es
ho ahy dia tena ilaina sy mora ampiasaina izy io, atoro anao izany.
Valiny tamin'i Sonia Cedenilla Pablos
Tahaka izany ny aquarium robotic miaraka amin'ny jellyfish HEXBUG AQUABOT
Ny On On of the Galaxy Note 7 dia misokatra ho an'ny rindranasa rehetra